စာရေးသူနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Emma Kennedy ကသူမသည်ပလတ်စတစ်လူများ၏သေးငယ်သောဖနောင့်ကိုဘာကြောင့်ခေါင်းထဲထည့်ထားရကြောင်းရှင်းပြသည်artများအတွက် icular penchant Lego Batman သေးသေးလေး။
ငါကသေးငယ်တဲ့အရာတွေ၊ ခွေးပေါက်စတွေ၊ ကလေးငယ်တွေ၊ Gremlins က Mogwai ပါ။ သငျသညျပျံ့ရ။ ဒါပေမဲ့ဒီအရာအားလုံးကို cocked ဦး ထုပ်ထဲခေါက်လိုက်တဲ့သေးငယ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့ကိုငါစွဲလမ်း သူတို့ကိုငါအလုံအလောက်မရနိုင်ဘူး အဆိုပါ hairdos, မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ, အ natty ထိပ်, ဦး ထုပ်။ ငါရိုးရိုးသားသားရိုးသားမယ်ဆိုရင်ငါသူတို့ကိုချစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းစိတ်ပျက်စရာညည်းသံငယ်လေးကအမြဲတမ်းရှိတယ် အုတ်တွေနဲ့ဖြေပါ ၎င်းသည်သေးငယ်သောရုပ်ပုံများမရှိကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ငါတို့ပြီးပြီ 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discoveryအထူးသဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Hubble တယ်လီစကုပ် - ဒါပေမယ့်ဒီအသေးစားဓာတ်ပုံတွေဘယ်မှာလဲ။ သင်္ဘောသားတွေကိုပစ်ဖို့သူတို့ကိုသတ်ပစ်မလား။ တစ် ဦး ကျပန်းဘီလျံနာအာကာသခရီးသွား? ည့်? တကျွန်းတနိုင်ငံသားဖြစ်သလော။ မဟုတ်ပါ။ သူတို့မရှိခြင်းကိုအလွန်အမင်းခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွက်လပ်ကိုချက်ချင်းတည်ဆောက်ရန်ဖိအားပေးခံရသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည် 60233 Donut ဆိုင်ဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာအရာ 10 နှင့်အတူကြွလာ။ ဒါကပိုပြီးတူတယ်။
RWB သည်စုပေါင်းအတွေ့အကြုံရှိသောကြောင့် - ကျွန်ုပ်သည်အဆောက်အ ဦး ကိုလုပ်သည်။ ပြပွဲတစ်ခုစီကလပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ AFOLWACs မှ (လူကြီးပရိတ်သတ်များ၏မှတ်ချက်များ) Lego ပြီးခဲ့သည့်နေ့ကတည်ဆောက်ခဲ့သည့် chums များကားမည်သူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အရာ၏သေးငယ်သောရုပ်ပုံများအတွက်ရှုပ်ထွေးပြီးမယုံနိုင်စရာပုံပြင်များကိုအမြဲတမ်းဖန်တီးထားသည်ကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
ငါသူတို့ကိုဥတွေဥတွေဥယျာဉ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ Jurassic Park က Richard Attenborough နဲ့တူတယ်၊ ဒါကြောင့် ၆၀၂၃၃ မှာငါတို့မှာ Mr Peters, Duke Detain (အမည်ရှိတစ်ခုတည်းသောဇာတ်ကောင်) Lego Y၊ ဂရက်ဂိုရီ၊ Mrs Shaw, Paul နှင့် Paula Pudding တို့နှင့်အတူနောက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း Stanley Mince နှင့်အတူ Terry Badboy၊ Wheels Ahoy၊ Jayne တို့ပါဝင်သည်။ ရှုပ်ထွေးနက်နဲသည့်ကြံစည်မှုများဖြစ်သည့်မြေအောက်ရေ၊ ကိစ္စများ၊ အငြင်းပွားနေသောဖခင်ဖြစ်ကြောင်းအငြင်းပွားဖွယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့်နိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။ အားလုံး RWB အပေါ်တစ်နေ့အလုပ်အတွက်။
ငါတို့သိပြီးချစ်မြတ်နိုးသည့်ခေတ်သစ်အသေးစားပုံများမပေါ်မီကအစုံသည်မျက်နှာများအလွတ်များ၊ ထူးဆန်း။ လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အစိုင်အခဲ torsos နှင့်လက်မောင်းမျှမရှိ။ မင်းကံကောင်းရင်မင်းမှာ ဦး ထုပ်တစ်လုံးရထားတယ်၊ ထို့နောက် 1978 ခုနှစ်တွင် Jens Nygaard Knudsen ငါတို့ယနေ့နေဆဲလဲလှယ်အသေးအဖွဲနှင့်အတူပေါ်လာခဲ့သည်။ မျက်နှာများအားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် - နှစ်ခုအစိုင်အခဲ dots မျက်စိနှင့်အားလုံးပြုံးနေသည် - ဒါပေမယ့်ဆီသို့ ဦး တည်ခရီး Batman ကျောက်ပုစွန်များဖြင့်ပိတ်ထားသည့်ပိုးထည်ဝတ်ဆင်ထားသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မတိုင်မှီကစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွင်ချိတ်ဆွဲထားသောလက်တစ်ချောင်းနှင့်ခြေထောက်အမျိုးမျိုးနှင့်မျက်နှာအသွင်အပြင်များတွေ့ရသည် Lego ပင်လယ်ဓားပြများသည် minifigure မီးတောက်၏ကမ္ဘာကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်မိတ်ကပ်၊ မျက်လုံးပွင့်လင်းစွာပါးစပ်များပေါ်လာပြီးမျက်လုံးများသည်အသေးစိတ်ကျလာသည်။
လူတိုင်းကသူတို့အကြိုက်ဆုံးရှိတယ်။ ငါ့မှာ ap ရှိတယ်artအထူးသဖြင့် The ကနေ Batmen များအတွက် icular penchant Lego Batman ရုပ်ရှင်နှင့် The Lego Movie ၂ Batman 70840 ပါ ၀ င်သည့် minifigure သည် Apocalypseburg သို့ကြိုဆိုပါ၏။ ပခုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အသုံးပြုသောတာယာများနှင့်ပြည့်စုံသည့်အစင်းကြောင်းများပါ ၀ င်သည်။ Batman; နတ်သမီးပုံပြင် Batman; မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း Batman သူ၏နို့သီးခေါငျးကျော်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ခွံနှင့်အတူ။ ဤရွေ့ကားငါအများဆုံးငါချစ်သောအသေးစား - ဒီဇိုင်နာများရယ်မောခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှိခြင်းကိုသင်မြင်နိုင်ပါသည်ရှိရာ။
မင်းသမီး Emma ရဲ့ minifigure စုဆောင်းခြင်း။
စုဆောင်းထားသောအသေးစား လူတိုင်း၏လက်ဖက်ရည်ဖလားဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုသီတင်းပတ်တွင်ပင်ကျွန်ုပ်သည် AFOL RWB ကိုကျွန်ုပ်အားအမှတ်တရလက်ဆွဲအိတ်သစ်ကိုနှစ်သက်သည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ရပ်နေသည်ဟူသောပုံပြင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားအမှတ်တမဲ့မှတ်မိစေခဲ့သည်။ 71030 Looney တီးလုံး အက္ခရာများ။ သူ့မှာကုန်စုံထောက်စုံရှိနေပြီးသူ့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာထူးခြားတဲ့ဒိန်ခဲအုတ်တွေနဲ့အတူ Speedy Gonzales ကိုအိမ်ပြန်ရောက်စေဖို့ AFOL နဲ့အတူသင်ဟာအသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်မှာအသေးအဖွဲအရှုပ်မခံပါနဲ့ ပလတ်စတစ်အိတ်ငယ်တွေကိုခံစားနေရတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာမင်းလမ်းပေါ်ရောက်လာပြီ
magnet ကိန်းဂဏန်းများ (ကျွန်ုပ်၌တစ်ခုရှိသေးသည်)၊ အသေးစားဓာတ်ပုံများ၊ nanofigures များရှိသည်။ သင်စုဆောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်လျှင်၎င်းတို့အားလုံးစွဲလမ်းစေသည်။ ငါလုံးဝသုညအကျိုးစီးပွားရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအကွာအဝေးဖြစ်ကြသည် Friends- အသေးအဖွဲရုပ်သေးများ။ The Lego အုပ်စုသည်ခြေတစ်လှမ်းမှားယွင်းမှုမရှိသလောက်နည်းသော်လည်းမိန်းကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်အသေးစားပုံများကိုကြီးမားသောမျက်လုံးကြီးသောထိတ်လန့်စရာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်အရိပ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သည်။ မစင်ကြယ်သောမိန်းမတို့၊
My Lego shed သည်မျက်နှာပြင်တိုင်းတွင် minifigure များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် RWB ရှိပုံမှန်များ၏မူကွဲများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂိုဏ်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ငါသူတို့ကိုကိုးကွယ်။ ငါ့ကိုသင်အကြိုက်ဆုံး၏ pics ပေးပို့ပါ @legowith or @emmakennedy တွစ်တာပေါ်မှာ။
← ဒီ LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာအစုံမှာအဆိုးရွားဆုံးစတစ်ကာပါရှိပါတယ်
ပထမ ဦး ဆုံး LEGO World Builder စီမံကိန်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် →